I-AnkerWork B600 ikhamera yewebhu yokusakaza bukhoma kanye nokuxhumana ngocingo [Buyekeza] | Amagajethi Ezindaba
UMiguel Hernandez | 01/05/2022 18:00 | General, Izibuyekezo
U-Anker uyaqhubeka nokusebenzela ukunikeza inqwaba yezinye izindlela nezinketho ngendlela yezesekeli zazo zonke izinhlobo zabasebenzisi, kungaba ngamashaja e-MagSafe, amathuluzi futhi vele, ngamakhamera ewebhu, elinye lamagatsha alo lapho likhanya khona kakhulu ngezinketho futhi izinga abakunikezayo, Yingakho kulesi senzakalo sibuyela embangweni futhi ngomkhiqizo walolu hlobo.
Sihlaziya ngokujulile ikhamera yewebhu ye-AnkerWork B600, idivayisi edizayinelwe ukusebenza ngocingo nokusakaza-bukhoma, enokukhanya, umbhobho nezipikha. Ungaphuthelwa ngoba ibekwe njengenye indlela ethokozisayo yokuthuthukisa umkhiqizo wakho.
3 Ukufakwa kanye nesoftware enziwa ngezifiso
4 ekusetshenzisweni kwansuku zonke
Le khamera entsha ye-Anker ithola ifa lomklamo ongunxande onamakhona ayindilinga esiwabona kumadivayisi ayo adlule. Nakuba kuyiqiniso ukuthi, njengakuwo wonke "ama-unboxing" ka-Anker, ikhwalithi ibonwa kusukela ngesikhathi sokuqala ezingeni lokwakha, ngisho nasezisekelini ezifana nezintambo. Sinengxenye engemuva lapho sithola khona izimbobo ezimbili ze-USB-C, ezidingekayo ukuze kudluliswe amandla nesithombe, kanye nembobo ye-USB-A ezosebenza njengedokhi.. Ngokwengxenye yayo, indawo ezungezile yenziwe ngendwangu, ukuze ikhiphe kahle umsindo wezikhulumi zayo ezihlanganisiwe.
Sinesizinda seselula esisivumela ukuthi silungise ikhamera yewebhu ibe phezulu kunoma yisiphi isikrini, futhi singakwazi futhi ukungena ngaphansi kwanoma yiluphi uhlobo lokusekelwa okujwayelekile kwamaselula noma amakhamera, kunjaloLena inketho engiyikhethile njengoba ngeke ngiyixhume unomphela esikrinini.
Ingxenye engaphambili ingeye-LED ekhanyayo evula ngehinge futhi ivikele ilensi. Emaceleni sinezinkinobho zokuthinta ezimbili zemakrofoni nokukhanyisa, into esingakwazi futhi ukuyilawula kuhlelo lokusebenza ngokwalo.
Le khamera inen 2K inzwa yokucaca ephezulu nakuba singayilungisa ngokwezidingo zethu, yebo, ngamakhono we izithombe ezingama-30 ngomzuzwana, nakuba kungekona ukuthi sidinga okwengeziwe ukusebenza noma ukusakaza. Usayizi wenzwa ungu-1/2.8 amayintshi futhi unesistimu yokuchayeka ezenzakalelayo, isistimu yebhalansi emhlophe ezenzakalelayo, ukugxila okuzenzakalelayo nomsebenzi wokutholwa nokulandela umkhondo womuntu, akukho okunye futhi akukho okuncane.
Ngakolunye uhlangothi sinakho amamakrofoni amane aqondiswa kabili kanye nezipikha ezimbili ze-2W ngayinye ukuze unikeze umsindo ocacile we-stereo uma kuziwa ezingxoxweni, konke ngokukhanselwa kwe-Auto Echo kanye nokukhansela umsindo wezingcingo, okuvumela izwi kuphela ukuthi lizwakale. Siphetha ngokuthi le-AnkerWork B600 ifakwe kahle kakhulu ezingeni lobuchwepheshe, nakuba sizokhuluma ngokusebenza kwayo kwesikhathi sangempela ngokuhamba kwesikhathi.
Empeleni, le Anker AnkerWork B600 i Hlanganisa futhi udlale, ngalokhu ngisho ukuthi izosebenza kahle kuphela ngokuyixhuma ethekwini I-USB-C kusuka kukhompuyutha yethu. Uhlelo lwayo lobuhlakani bokwenziwa kanye namakhono e-autofocus kufanele anele usuku lwethu nosuku. Nokho, kubalulekile ukuba nesofthiwe yokusekela, kulokhu esikhuluma ngakho I-AnkerWork ongayilanda mahhala, kuyo sizothola izinketho eziningi, kepha into ebaluleke kakhulu kungenzeka ukubuyekeza isoftware ye-webcam futhi ngaleyo ndlela yengeze ukusekelwa kwayo.
Kule software sizokwazi ukulungisa ama-engeli amathathu wokubuka we-68º, 78º no-95º, kanye nokukhetha phakathi kwezimfanelo ezintathu zokubamba phakathi izinqumo ezahlukahlukene ngokusebenzisa ithuba lokulungisa i-FPS, ukwenza kusebenze futhi kungasebenzi ukugxila, i HDR futhi a Umsebenzi we-Anti-Flicker okuthakazelisa kakhulu lapho sikhanyiswa ama-LED ama-bulb, uyazi ukuthi kulezi zimo ngokuvamile kuvela ama-filicker angacasula, into esizoyigwema ngokuphawulekayo. Naphezu kwakho konke, sizoba namamodi amathathu azenzakalelayo kuye ngezidingo zethu lezo ezizuza kakhulu ku-AnkerWork B600 ka-Anker.
Sincoma uma kwenzeka unqume ngale khamera itholakala kuwebhusayithi yakwa-Anker naku-Amazon, ukuthi uyashesha ukufaka i-Anker Work futhi uthathe ithuba lokuvuselela i-firmware yekhamera.
ekusetshenzisweni kwansuku zonke
Le khamera iwine imiklomelo emibili e-CES 2022 futhi kungenxa yokuthi sibhekene ne-“All-in-One”, idivayisi ekwazi ukwehlisa inani lama-“clunkers” esinawo etafuleni lethu sibonga ukuwahlanganisa ndawonye. eyodwa eyodwa. Ngaphezu kwalokho, isebenza kahle kuzo zonke izindawo, ngale ndlela, Sekuyikhamera yethu ezenzakalelayo ye-iPhone News Podcast yamasonto onke lapho sabelana khona ngolwazi mayelana nemicimbi yamanje emhlabeni wobuchwepheshe uwonke.
Yilapho ikhombise khona ikhono layo, ikakhulukazi ngenxa yesistimu yayo yokukhanyisa i-LED esizokwazi ukuthweswa iziqu phakathi kwamathoni abandayo nafudumele, njengoba lesi esisanda kubalula iyona kanye into yokukhanyisa esetshenziswayo.
Ikhamera ineVoiceRadar Esimeni lapho sinquma ukusebenzisa imibhobho yayo, lokhu akuyona into engaphezu kwesistimu yokukhansela umsindo yangaphandle ecacisa ukusebenza kocingo nokuthi ekuhlolweni kwethu kuboniswe ukuthi kusebenza kahle kakhulu ekuqedeni umsindo ongemuva nokugxila kuphela kubaxhumanisi. .
Ngaphezu kwalokho, ikhamera inohlelo ifreyimu kuphela, okungeyona into engaphezu kokulandelela okuqondile komuntu, okuhlala kuhlale kuphambili. Ezivivinyweni zethu, kuboniswe ukuthi kusebenza kahle kakhulu kokubili ezingeni lokugxila kanye nokulandelela ngokwayo, into esiyiqaphele ekuthuthukisweni kwemisebenzi.
ungenza nge I-AnkerWork B600 iqala kuma-euro angama-229 kuwebhusayithi ye-Anker, noma ngokuqondile nge-Amazon, nakuba uzophinde ukuthole kwamanye amaphuzu avamile okuthengisa.
Ngale ndlela, ibekwe njengenye yamakhamera aphelele futhi ahlukahlukene kakhulu e-All-in-One emakethe futhi kwa-Actualidad Gadget asinakwenza lutho ngaphandle kokuyincoma.
Kuthunyelwe ku: May 1 we-2022
Ukulungiswa kokugcina: May 1 we-2022
Kufanele ifake i-kickstand
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-AnkerWork B600 ikhamera yewebhu yokusakaza bukhoma kanye nokuxhumana ngocingo [Buyekeza]